Umhlaba we-inthanethi ugcwele ama-hacks womdlalo we-PUBG. Kepha iningi labo linikeza izinketho ezinomkhawulo. I-technical King VM APK iyihlukile. Lolu uhlelo lokusebenza lwe-ESP oluzokushaya ingqondo yakho. Funda i-athikili futhi wazi okuningi ngayo.
Sine-craze yokwenza kangcono ku-PUBGM yesikhulumi. Lokhu craze bekulokhu kuthinta amazinga umlutha we-Ultra. Umdlalo udumile emhlabeni wonke jikelele, manje, yigama elivamile phakathi kwazo zonke izinhlobo zabasebenzisi beselula.
Uma unokufinyelela kwe-inthanethi futhi ungumnikazi we-smartphone. Kufanele ngabe uyizwile nayo. Lapha sizokunikeza uhlelo lokusebenza lwe-Hack ongalusebenzisa noma kumadivayisi angenazimpande ngaphandle kokwesaba ukuvinjwa. Ukuze ube nayo vele uthole inketho yokulanda kuleli khasi bese uyifaka mahhala kwifoni yakho ye-Android Mobile noma i-Tablet.
Yini i-technical King VM APK?
Lokhu empeleni uhlelo lokusebenza lokugenca kwesikhulumi seselula se-PUBG. Lokhu kukopela kwe-ESP kungenye yezinto ezinhle kakhulu oyoke uzithole kuhlu lwazo zonke izinhlelo ezinjalo ezitholakala kumapulatifomu e-inthanethi.
Njengoba wazi ukuthi i-PUBGM ngumdlalo wesenzo owethulwe ngezingcingo nama-Smartphones kufaka phakathi amadivaysi aphethwe uhlelo lwe-Android. Lolu hlelo lokusebenza esikhuluma ngalo likuvumela ukuthi usebenzise uhlu olude lokukhohlisa ku-videogame ngaphandle kokufaka umazisi wakho engozini.
Sonke siyazi ukuthi ukunqotshwa kule nkundla yokudlala akunakwenzeka ngaphandle kokutshala inani elikhulu lesikhathi ngamakhono okufunda nokwenza ukunyakaza kwethu kube bukhali futhi kubexekile.
Kodwa-ke, iningi lethu alinaso isineke sokuqongelela la makhono kancane kancane. Ngeke sikwazi ukukhokhela isikhathi eside sokutshala imali nezinsizakusebenza.
Kwabanjalo futhi nakulabo abafuna ukujabulisa abangane nezitha ngokufanayo sinezinhlelo zokusebenza ezifana ne-technical King VM APK. Kunamathuluzi abizwa ngokuthi i-software yokugenca noma yokukhohlisa. Lokhu kuklanyelwe ngqo ukunika abasebenzisi ithuba emikhakheni eminingi yomdlalo.
Lokhu kungasebenza ngesikhathi somdlalo ukuze ube namandla, ube namathuluzi angavamile, wandise impilo, ama-ammo, noma esinye isici segeyimu. Uzobona imakethe online egcwele izinto ezinjalo namathuluzi.
Lawa mathuluzi asizayo kepha awaziphathi kahle isikhathi esiningi. Ngaphezu kwalokho, abahlinzeki bemidlalo yasehhovisi abayithathi kancane futhi bathathe izinyathelo kaningi zokusungula inkundla yokudlala efanele bonke abasebenzisi.
Lokhu kusho ukuthi abantu abasebenzisa lawo mathuluzi we-hack bayasuswa ekudlaleni noma endaweni yesikhulumi noma banikezwe izexwayiso. Kuya ngenhlanhla yomuntu obanjiweyo.
Naphezu kwalezi zingozi, inani elikhulu labathandi be-videogame basebenzisa amathuluzi anjalo wokukhohlisa futhi i-technical King VM APK ihola uhlu.
Igama I-technical King VM PUBG
Usayizi 6.89 MB
Unjiniyela Inkosi yezobuchwepheshe
Igama lephakheji com.tencent.ig.com.pubg.krmobile.com.vng.pubgmobile.com.rekoo.pubgmobile.tkvm.tk22
Iyadingeka i-Android 4.1 nangaphezulu
Izici ze-technical King VM APK
Le kit yamathuluzi amangalisayo inezici eziningi ezimangazayo. Uzoyithola ilusizo kakhulu, inobungane, futhi isebenza kahle ngesipiliyoni sabasebenzisi. Nazi ezinye zezici.
Isebenza imodi engenazimpande. Ngakho-ke asikho isidingo sokudlulela kwinqubo ende futhi eyisidina yokusungula izingcingo. Kuzobhekelwa kuwe izibhamu eziningi ezifana neMK, A4, nezinye eziningi ngaphandle kwakho uma kungekho imizamo. I-ESP Yokuthola indawo yezimoto ezinjengezimoto, amaloli.
Amanye ama-hacks abhalwe ngezansi.
Futhi okuningi okuningi
Ungayenza kanjani i-technical King VM APK Ukulanda?
Dlula kulezi zinyathelo. Lokhu kuzokutshela ukuthi ungalanda kanjani uhlelo lokusebenza, ulufake, ulusebenzise.
Okokuqala, thola Inkinobho Yokulanda i-APK kusixhumanisi esingezansi
Thepha kukho ukuqala ukulanda
Thola ifayela kwifoni yakho bese uthinta kuyo ukufaka
Vumela Imithombo Engaziwa kusuka kuzilungiselelo zokuphepha
Manje uthepha izikhathi ezimbalwa futhi usuqedile.
Lokhu kuzokufaka uhlelo lokusebenza lwe-thuluzi lokugenca le-technical King VM APK ngawe. Ngakho-ke vula ngemuva komdlalo. Khetha kusethi yokuphamba ofuna ukuyisebenzisa bese uyivume. Manje, vula umdlalo we-PUBM bese uqala ukudlala njenge-pro. Isikhathi sokuba yinkosi yesiqhingi futhi umangaze izitha zakho nabangane ngezinsizakalo.
Sizokuchazela ukuthi ungalusebenzisa kanjani lolu hlelo lokusebenza kuselula noma kwi-smartphone yakho. Lolu hlelo lokusebenza lusebenza ngokudala isikhala esihlukile kufoni yakho. Ngakho-ke ungasebenzisa inqubo ehambisanayo yohlelo lokusebenza noma i-Clone njengoba kungenzeka uzwe ngenye indlela.
Lokhu kwenza ubunikazi obufana befoni yakho obuhlukile kunasekuqaleni. Okwesibili, lolu uhlelo lokusebenza olungeyona impande okusho ukuthi awudingi ukusiphula ifoni yakho ukuze uphephe.
Ngeke utholwe yingxenyekazi ye-PUBG futhi ungasebenzisa wonke amaqhinga namathiphu lapha ngaphandle kokwesaba. Lapha ungaba ngumnqobi wokugcina wesidlo sakusihlwa seChicken. I-technical King VM APK yenza lokho kuqiniseke.
Ingabe i-technical King VM APK Ukulanda Iphephile?
Abenzi balolu hlelo lokusebenza bathi kuphephile ngo-100% ukusetshenziswa. Kepha asazi ukuthi isibuyekezo esisha sizofika nini epulatifomu ye-PUBG. Ukuvuselelwa ngakunye kuza nezici zokuphepha ezisezingeni eliphakeme ezingase zingavinjelwa ngempumelelo ithuluzi likaHack yilelo elaligqokwe.
Kuleso simo, ubunikazi bakho bungase buthathelwe phansi buholele ekuvinjelweni okungapheli kusuka endaweni yesikhulumi se-videogame. Ngakho-ke kungukuqonda kwakho. Sebenzisa amathuluzi asengozini yakho futhi leli thuluzi lokukopela akuyona eyehlukile.
Ezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo:
I-Global Virtual Apk
I-technical King VM APK iyithuluzi lamathuluzi likaHack yilelo elaligqokwe ukusebenzisa ipulatifomu yokudlala ye-PUBGM. Leli thuluzi elingenazimpande likaHack yilelo elaligqokwe lizokunikeza inkululeko enkulu namandla okubamba futhi abe ngumnikazi wesiqhingi kuze kube sekupheleni.
Ukuthola ifayela le-APK, vele uthephe isixhumanisi esinikezwe ngezansi bese uthole uhlobo lwamahhala nolwakamuva lwe-Android yakho.
Izigaba Amathuluzi, Game Ukugenca Amathegi I-technical King VM APK, I-technical King VM APK Landa Imeyili kwemikhumbi